प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने उमेर समूहकै धेरै संक्रमित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
समुदायमा संक्रमण नदेखिएकाले जोखिममा रहेको समूह जोगिएको विज्ञहरूको भनाइ
जेष्ठ २९, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको उमेर समूहमा थोरै देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले समुदायमा संक्रमण नदेखिएकाले जोखिममा रहेको समूह जोगिएको बताए । उक्त समूहमा संक्रमणको व्यापक विस्तार भए मृत्युदर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
मुलुकमा बुधबारसम्म ४ हजार ३ सय ६४ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएकामा ६० वर्षभन्दा माथिका ४१ जना छन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका ६० वर्ष वा त्यसमुनिका समूहका संक्रमित करिब ९९ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ३ सय २३ छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार मुलुकमा हालसम्म फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूबाहेक भारतसहित विदेशबाट आउने र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा बढी संक्रमण देखिएको हो ।
कोभिड–१९ ले बुधबारसम्म दुईवर्षे बालिकादेखि ७६ वर्षीय पुरुषसम्मका १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिका मृतकको संख्या दुई छ । कोभिड–१९ को मृत्युदर नेपालमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत देखिएको छ । अर्थात् तीन सय जना संक्रमितमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ‘संक्रमित साढे चार हजार पुग्न लाग्दासमेत मृत्युको प्रतिशत कम देखिएको छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘भविष्यमा समुदायमा संक्रमण देखिए मृत्युदर बढी हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा बूढापाका, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएकामा संक्रमण कम फैलिएको छ ।
पहिलेदेखि नै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएर रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएकाहरूको संक्रमणबाट मृत्यु भएको डा. अधिकारीले बताए । ‘हालसम्म मृत्यु भएकाहरूमध्ये दुई–तीन जनाबाहेकमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या थियो ।’ विज्ञहरूका अनुसार हालसम्म मृत्यु भएकामा बढी उमेर, पहिलेदेखि मधुमेह, मुटु, फोक्सो र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, अन्य गम्भीर रोग प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । ‘हालसम्म कोरोना समुदायमा गएको प्रस्ट देखिएको छैन,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले भने, ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका र बूढापाकालाई यो संक्रमण हुन सक्ने जटिलताबाट जोगाउनु मुख्य चुनौती छ ।’ उनका अनुसार बूढापाका, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका समूहमा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदा मृत्युदर बढ्छ ।
बीएमजेमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका, पुरुष, मोटोपना, मुटुरोग, फोक्सो, कलेजो र मिर्गाैलासम्बन्धी रोगले ग्रस्तहरूमा कोभिड–१९ संक्रमणले मृत्युको बढी खतरा हुने देखिएको छ । यो विषयमा बेलायतमा गरिएको अध्ययनअनुसार अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूमा औसत आयु ७३ वर्ष थियो । उमेरबाहेक मुटु, फोक्सो, कलेजो, मिर्गाैला रोग भएकाहरूलाई बढी समस्या देखियो ।
नेपालमा मृत्यु भएका पन्ध्रौं व्यक्तिमा मधुमेह, रक्तचापको समस्यासँगै ज्वरो र निमोनियासमेत देखिएको थियो । ती व्यक्ति पुरुष थिए । कोभिड–१९ ले निको हुने दर बुधबार १५ प्रतिशत पुगेको छ । संक्रमण दिनहुँ तीव्र गतिले बढेकाले निको हुने दर कम देखिएको हो । यही गतिमा संक्रमण विस्तार जारी रहे समुदायमा फैलिन सक्ने डा. पाण्डेले बताए । ‘भारत र अन्य मुलुकबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्म राखेर परीक्षणपछि संक्रमण नभएको सुनिश्चित गरेर पठाउँदा समुदायमा फैलिने जोखिम कम हुन्छ,’ उनले भने ।
बुधबार मुलुकभरिको क्वारेन्टाइनमा १ लाख ६५ हजार ७ सय ७५ जना छन् । क्वारेन्टाइनमा रहेका अधिकांश भारतबाट फर्किएका नेपाली हुन् ।
२७९ संक्रमित थपिए
कोभिड–१९ बाट संक्रमित बुधबार २ सय ७९ थपिएका छन् । हालसम्म ४ हजार ५५ पुरुष र ३ सय ९ महिला गरी ४ हजार ३ सय ६४ जना संक्रमित भइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ संक्रमित सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, प्यूठान, रूपन्देही, जाजरकोट, डडेलधुरा, गोर्खा, नुवाकोट, दैलेख, सुर्खेत, दार्चुला, उदयपुर, नवलपुर, सर्लाही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, बाँके, बर्दिया, सप्तरी, कैलाली, कञ्चनपुर, सर्लाही, धादिङ, धनुषा, रौतहट र सिरहाका छन् । हालसम्म संक्रमित ७२ जिल्लाका हुन् । बुधबार ९० जना विभिन्न स्वास्थ्य निकायबाट निको भएर घर फर्केका छन् । हालसम्म निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या ६ सय ७४ छ ।
पीसीआर परीक्षण बुधबार ४ हजार ४ सय १४ नमुुनाको गरिएको छ । हालसम्म १ लाख १० हजार ७ सय ७४ नमुनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ ०८:०३
पसल बन्दविरुद्ध प्रदर्शनमा व्यवसायी
भन्छन्, ‘सरकारले माग सम्बोधन नगरे विरोधलाई देशव्यापी बनाउँछौं’
जेष्ठ २९, २०७७ नुमा थाम्सुहाङ
काठमाडौँ — व्यवसायीहरूले बुधबार बिहान सरकारविरुद्ध र्‍याली प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यापार महासंघ र रञ्जना व्यापार संघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले काठमाडौंको न्युरोडमा आफ्ना मागसहित विरोध र्‍याली निकालेका हुन् ।
व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिभरको घरभाडा छुट, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याज छुट, राजस्व छुट, निजी क्षेत्रको समन्वय समिति गठन र व्यवसायीहरूका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरे ।
सरकारले व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गरेन भने यसलाई देशव्यापी बनाउने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले चेतावनी दिए । ‘भोको पेट घर बस्न सम्भव छैन । सरकारले बाहिर गरिखान दिँदैन,’ उनले भने, ‘आजदेखि सुरु गर्‍यौं । आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ । सम्बोधन भएन भने अघि बढ्छौं ।’
सरकारको निर्णय मान्न भन्दै प्रहरीले काठमाडौंमा मंगलबार खुलेका पसल बन्द गर्न लगाएका थिए । यसैबीच न्युरोडस्थित रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा प्रहरीले आफूहरूमाथि हातपात गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उक्त घटनाप्रति महासंघले आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पसल खोल्न कुनै अवरोध नगर्ने भनिसकेका छन् । तर प्रहरी प्रशासनले यसमा अवरोध गर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ । महासंघले गत बिहीबारदेखि पसल सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै आफ्नो मातहतका व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सुर्खेतका व्यवसायी पनि आन्दोलित
वीरेन्द्रनगर– निजी क्षेत्र धरापमा पर्दै गएको भन्दै सुर्खेतका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निजी क्षेत्रका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणालगायत माग गर्दै बुधबार शान्तिपूर्ण विरोध जुलुस निकालेको हो । व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सातबुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।
लकडाउनको समयमा ठप्प रहेका उद्योग व्यवसायलाई सरकारले विशेष आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लकडाउन अवधिसम्म काम गरिरहेका श्रमिक र कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि ५० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले बताए । लकडाउन अवधिभर बैंक ब्याज, घरभाडा, राजस्व, महसुल र शुल्क निश्चित अवधिका लागि मिनाहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले जनाए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ ०८:०२